मालवेयर आक्रमणबाट फीड? - Semalt उद्धार गर्न आउँदैछ!
Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक, लिसा मिशेल चेतावनी दिन्छ कि इन्टरनेट को उपयोग गर्दा केहि वेबसाइटहरु र कार्यक्रमहरु जोगिन यो सधैं आवश्यक छ। यो किनभने केहि वेबसाइटहरू र प्रोग्राममा मालवेयर, ट्रोजन र भाइरस हुन्छन् जसले कम्प्युटरको कार्यलाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्दछ। थप रूपमा, हानिकारक प्रोग्रामहरू र वेबसाइटहरूले पहिचान चोरी र वित्तीय घोटालाको केसहरू बढाउन सक्छन्।
अनलाइन मालिसियस कार्यक्रमहरूको एक उच्च व्याप्ति स्तर छ। यी कार्यक्रमहरूमा मालवेयर, मार्केटिंग सफ्टवेयर, र विज्ञापन सन्देशहरू समावेश छन्। छलफलले विभिन्न कार्यक्रम र वेबसाइटहरूको सूची प्रदान गर्दछ जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई जोखिम हुन सक्छ। प्रयोगकर्ताले यो बुझ्नका लागि महत्वपूर्ण छ कि प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको वेबसाइटहरू र कम्प्युटर प्रोग्रामहरू पनि खराब प्रोग्रामहरूबाट संक्रमित हुन सक्छन्। यो तथ्य यो छ कि सूचना प्रविधि कर्मचारीहरु प्रोग्राम र कम्पनी को वेबसाइटहरु को प्रबन्धन मा धेरै प्रयास र संसाधनहरु को उपयोग को बावजूद हो। सूची व्यापक छैन किनकि यसले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन कि इन्टरनेट ब्राउजर गर्ने बित्तिकै मालवेयर, ट्रोजन, वा भाइरसको मामिला इन्टरनेटमा देखा पर्दैन।
त्यहाँ कम्प्युटर सुरक्षा रणनीतिहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताहरूले वेब ब्राउज गर्दा अवलोकन गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, प्रयोगकर्ता को गैर प्रशासनिक खाता प्रयोग गरी अनलाइन साइटहरु को उपयोग गर्नु पर्छ। कम्प्युटर सुरक्षाको बारेमा अधिक जानकारी निम्न वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ: it.unh.edu/bestpractices। थप रूपमा, प्रयोगकर्ताले सूचना प्रविधि पेशेवरहरू वा संगठनको सूचना प्रविधि विभागबाट कम्प्युटर सुरक्षा जानकारी लिन सक्दछ।
खतरनाक वेबसाइटहरूको सूची:
वेबसाइटहरू नि: शुल्क सेवाहरू प्रदान गर्दछ
नि: शुल्क मनोरन्जन साइटहरू जसले पाइरेटेड संगीत, भिडियो, वा सफ्टवेयर डाउनलोड सेवाहरू प्रदान गर्दछ। नि: शुल्क मनोरन्जन डाउनलोड साइटको एक उदाहरण "Warez" हो।
पियर-टु-पेयर (P2P साइटहरू)
अस्पष्ट खोज ईन्जिनहरू। इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूलाई बिन्ग, गुगल, र याहू जस्ता सामान्य खोज इन्जिनहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ।
वेबसाइटहरूलाई पहुँच अनुमति दिन डाउनलोड वा स्थापना आवश्यक छ
अनलाइन जाभा खेल, वा वेब आधारित फ्ल्यास
कुपन र व्यापार सम्झौता साइटहरू
तेस्रो-पार्टी साइटहरू जुन शुल्कमा सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यी सेवाहरू कुनै शुल्क बिना मूल कम्पनी द्वारा प्रदान गरिएको हो। शंकास्पद तेस्रो पक्ष साइटहरूको उदाहरणहरूमा क्रेडिट रिपोर्ट वेबसाइटहरू, सार्वजनिक डाटाबेस, यात्रा जानकारी, र अनलाइन नक्शा समावेश छन्।
नि: शुल्क व्यक्ति खोजी साइटहरू
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले नि: शुल्क डाउनलोड सेवाहरू प्रदान गर्ने वेबसाइटहरू बेवास्ता गर्नुपर्छ। किनभने यी वेबसाईटहरूमा केहि फाईलहरू वा अनुप्रयोगहरू अवांछनीय सफ्टवेयर, मालवेयर, ट्रोजन, वा भाइरसको साथ इम्बेड गरिएको छ।
मालिसियस सफ्टवेयरको गुण राम्रो छैन, र यसले कम्प्युटरलाई सफ्टवेयर र हार्डवेयर समस्याहरूको अनुभव गर्न सक्छ। थप रूपमा, इम्बेडेड मालवेयरले डाटा चोरी वा महत्त्वपूर्ण फाइलहरू नष्ट गरेर नकारात्मक रूपमा कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई असर गर्न सक्छ। सफ्टवेयर डाउनलोड साइटहरू समावेश गर्नु हुँदैन:
स्थिर वा स्वचालित वालपेपर
"अनन्य" वा नि: शुल्क प्रस्तावहरू
संगीत, भिडियो, वा खेलहरूको लागि मनोरन्जन डाउनलोडहरू
नक्कली एन्टिभाइरस वा इन्टरनेट सुरक्षा कार्यक्रम
रेजिस्ट्री सफा गर्ने
इन्टर्नेट "स्पीड अप्स"
इलेक्ट्रोनिक ग्रीटिंग कार्डहरू
एनिमेटेड डेस्कटप छविहरू
उत्पाद कुञ्जी जेनरेटरहरू
खोज ईन्जिन सेटिंग्स
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले प्रतिष्ठित वेबसाइटहरूबाट मात्र कम्प्युटर प्रोग्रामहरू डाउनलोड गर्नुपर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि कम्प्युटरमा स्थापित र अप-टु-डेट सुरक्षा प्रोग्रामहरू छन् जसले कम्प्युटरलाई मालवेयर, ट्रोजन, वा भाइरस आक्रमणबाट जोगाउँछन्।